UVera Brezhneva washintsha ngokungalindelekile isithombe sakhe - waba Brunette - Bonisa Ibhizinisi 2022
UVera Brezhneva washintsha ngokungalindelekile isithombe sakhe - waba Brunette
Umculi uVera Brezhneva umangaze izethameli ngokushintsha okumangalisayo kwesithombe. Lesi sihlabani sashintsha kakhulu izinwele zakhe nombala wezinwele.
Ngokokuqala ngqa eminyakeni eminingi, uVera Brezhnev akashintshanga nje kuphela izinwele zakhe, kodwa nombala wezinwele zakhe. Ku-Instagram yakhe, lesi sihlabani siveze isithombe esizibeka kuso ngendlela engajwayelekile.
Kunzima ukukholelwa, kodwa uBrezhnev ngaphandle konembeza wahlukana nama-curls akhe okunethezeka kanye nomthunzi okhanyayo wezinwele - futhi waba i-brunette evuthayo.
Yiqiniso, kumazwana esithombeni, u-Vera wabelane ngezimfihlo zokudala isithombe futhi wembula imfihlo eyinhloko - ugqoke … iwigi. Akazange namanje asishintshe isimo sakhe esivamile.
Lesi sihlabani esineminyaka engu-35 ubudala sinqume ukushintsha umbala waso wezinwele nombala wezinwele ukuze sibe yisithombe esimangalisayo kumagazini. Futhi njengoba kwenzeka, kwenzeka eminyakeni emithathu edlule. UVera uvele wanquma ukuba nostalgic.
Ukubhema kuyingozi empilweni yakho. Angibhemi. Bekuyisithombe nje. Enye yezintandokazi
- UVera Brezhnev ubhala ekhasini lakhe le-Instagram.
UVladimir Ostapchuk wazama isithombe umbulali maniac Freddy Krueger
Indlela yokuveza imizwa yakho ngombala wezingubo: ukudala isithombe esivumelanayo
Ungabukeka kanjani umncane ngenkathi uhlala esisindweni sakho (isithombe)
"Yebo, angiyena mncane, - wabhala umfundi wethu u-Olga. - Kodwa ngeke ngiqhubeke nokudla! Ngikhululekile ngesisindo sami. Ngifuna nje ukufunda indlela yokubuka ukusika ngokweqile." Ingabe nawe uyawusekela umbono ka-Olya? Khona-ke lesi sihloko singenxa
UVera Wong waqala ukukhiqiza amakhekhe omshado nama-dessert ngaphansi kwegama lakhe
Umklami womshado odumile u-Vera Wong usebenzisana nesitolo samakhekhe saseFrance ukwethula iqoqo lokuqala lama-dessert omshado akhethekile